Akuko - you mara iwu ekwesịrị ịgbaso na nhazi PCch patch?
Know mara iwu aga-agbaso na PCBA patch nhazi?
Inye gi PCBA ihe omuma oh! Bịa lee!
PCBA bụ mmepụta usoro nke PCB oghere osisi site SMT mbụ wee mikpuo nkwụnye, nke na-agụnye ọtụtụ ezi na mgbagwoju usoro eruba na ụfọdụ mwute mmiri. Ọ bụrụ na arụghị ọrụ ahụ ahazi, ọ ga-ebute nrụrụ usoro ma ọ bụ mmebi akụrụngwa, metụta ogo ngwaahịa yana ịbawanye ọnụahịa nhazi. Yabụ, na nhazi mgbawa PCBA, anyị kwesịrị isoro iwu ndị dị mkpa na-arụ ọrụ ma na-arụ ọrụ nke ọma dịka ihe achọrọ. Ihe a bu okwu mmeghe.
Usoro ọrụ nke PCBA patch nhazi:
1. Agaghị enwe nri ma ọ bụ ihe ọ drinkụ inụ na mpaghara ọrụ PCBA. Okingokingụ sịga machibidoro iwu. Agaghị etinye sundries na-adịghị mkpa maka ọrụ ahụ. E kwesịrị idebe ebe ọrụ ahụ ọcha.
2. Na PCBA mgbawa nhazi, elu na-welded-apụghị iwere na iferi aka ma ọ bụ mkpịsị aka, n'ihi na griiz zoro ezo site n'aka ga-ebelata ịgbado ọkụ na mfe iduga ịgbado ọkụ ntụpọ.
3. Belata usoro ọrụ nke PCBA na akụrụngwa ka opekempe, iji gbochie ihe egwu. Na mpaghara mgbakọ ebe a ga-ejirịrị gloves, gloves ndị merụrụ emerụ nwere ike ibute mmetọ, ya mere ọ dị mkpa iji dochie gloves ugboro ugboro.
4. Ejila griiz na-echekwa akpụkpọ ma ọ bụ nchacha nke nwere resin silicone, nke nwere ike ibute nsogbu na ire ere na nkwekọ mkpuchi conformal. Ihe ndozi ndozi di iche maka ebe ihu igwe nke PCBA di.
5. A ga-amata EOS / ESD mmiri nwere mmetụta na PCBA yana akara EOS / ESD kwesịrị ekwesị iji zere ọgba aghara na ihe ndị ọzọ. Na mgbakwunye, iji gbochie ESD na EOS itinye ihe ndị nwere mmerụ ahụ, arụmọrụ niile, mgbakọ na nnwale ga-agwụrịrị na workbench nke nwere ike ijikwa ọkụ eletrik.
6. Nyochaa EOS / ESD na-arụ ọrụ oge niile iji hụ na ha na-arụ ọrụ nke ọma (mgbochi static). Kindsdị ihe egwu niile nke ihe EOS / ESD nwere ike ibute site na usoro nkwụsị ala na-ezighi ezi ma ọ bụ oxide na njikọ njikọ. Ya mere, a ga-enye nchebe pụrụ iche na nkwonkwo nke "eriri nke atọ".
7. A machibidoro ịtụkọta PCBA, nke ga-ebute mmebi anụ ahụ. A ga-enye ihe nkwado pụrụ iche na nzukọ ọgbakọ a na-eche ihu ma dọba ya n'ụdị ya.
Iji hụ na ngwaahịa ikpeazụ dị na ngwaahịa, belata mmebi nke akụrụngwa ma belata ọnụ ahịa, ọ dị mkpa ịgbaso iwu ọrụ ndị a ma rụọ ọrụ nke ọma na nhazi PCBA.
Onye nchịkọta akụkọ nọ ebe a taa. Itnwetawo ya?
Oge nzipu ozi: Jul-29-2020
Nke kacha ọhụrụ Akụkọ
Otu esi edozi nsogbu EMI na Mul ...
You ma ka esi edozi EMI nsogbu mgbe ị na-eme ọtụtụ ihe PCB? Ka m gwa gị! E nwere ọtụtụ ụzọ isi edozi E ...
Know mara iwu nchịkwa ...
Inye gi PCBA ihe omuma oh! Bịa lee! PCBA bu mmeputa usoro PCBB blanket board site na SMT mbu na ...